အားပေးနေတဲ့ ကိုကိုမောင်တွေ နားထောင်ဖို့ အတွက် ကိုယ်တိုင် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်တင်ပေး လိုက်တဲ့ ခေးလုကြီး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Likes
ပရိသ တ်ကြီး ရေ ပုရိသ ကိုကို တို့ရဲ့ အသ ည်းစွဲ ဖြစ်တဲ့ ခေးကြီး လုလုေ အာင် က တော့ single mother တစ်ေ ယာက် ဖြစ်ပြီး အမိုက်စား ခန္ဓာကို ယ် ကော က်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ ဆွဲဆော င်မှု ရှိရှိ လှနေ ကာ အနုပ ညာ လောက မှာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည် နေနိုင် တာလ ည်း ဖြစ်ပါတယ် နော်ပိုမို လှသွေးကြွယ် နေတဲ့ သူလေး ဖြစ်ပါ တယ်..။
လုလုအောင် ကတော့ အမြဲတန်း လန်း ဆန်း တက်ကြွ နေပြီး အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေ ကို လည်း အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင် နေသူပါ နော်..။
သူမကေ တာ့ ချစ်ရတဲ့ သမီးလေး ကို အချိန် ပေးပြီး ပျော်ရွှင် စွာ နေထိုင် တတ်သူ လည်း ဖြစ်တာ ကြောင့် ပရိသတ် တွေက သူမ ကို ပိုပြီးချစ် ခင် အားပေး နေ ကြတာပါ နော်.
လက်ရှိ မှာ ဆိုရင် လည်း လုလုအောင် ဟာ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို လူမှုကွန်ယက် ပေါ် တွင် တင်ပေး လေ့ရှိ ပါတယ် နော်..။ အခုနောက်ပိုင်း မှာ လုလုအောင် ဟာ တင်လိုက်တိုင်း လည်း အမိုက်စား ပုံလေး တွေပဲ တင်တတ် တာ ကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ ဝန်းရံမှုကို ရရှိနေတာ ပါ..။
မကြာသေးမီ ကလည်း သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာ အလန်းစား ပုံလေး တွေ တင်ပေး လာ ခဲ့ပါ တယ်.ပရိသတ်ကြီး အတွက် လုလု အောင် ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေကို ပြန်လည် မျှဝေ ပေးလိုက်ပါ တယ် နော်…။
ပရိသ တ္ႀကီး ေရ ပုရိသ ကိုကို တို႔ရဲ့ အသ ည္းစြဲ ျဖစ္တဲ့ ေခးႀကီး လုလုေ အာင္ က ေတာ့ single mother တစ္ေ ယာက္ ျဖစ္ၿပီး အမိုက္စား ခႏၶာကို ယ္ ေကာ က္ေၾကာင္း အလွေတြ နဲ႔ ဆြဲေဆာ င္မႈ ရွိရွိ လွေန ကာ အႏုပ ညာ ေလာက မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ ေနနိုင္ တာလ ည္း ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ပိုမို လွေသြးႂကြယ္ ေနတဲ့ သူေလး ျဖစ္ပါ တယ္..။
လုလုေအာင္ ကေတာ့ အျမဲတန္း လန္း ဆန္း တက္ႂကြ ေနၿပီး အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြ ကို လည္း ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ ေနသူပါ ေနာ္..။
သူမေက တာ့ ခ်စ္ရတဲ့ သမီးေလး ကို အခ်ိန္ ေပးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ေနထိုင္ တတ္သူ လည္း ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြက သူမ ကို ပိုၿပီးခ်စ္ ခင္ အားေပး ေန ၾကတာပါ ေနာ္.
လက္ရွိ မွာ ဆိုရင္ လည္း လုလုေအာင္ ဟာ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို လူမႈကြန္ယက္ ေပၚ တြင္ တင္ေပး ေလ့ရွိ ပါတယ္ ေနာ္..။ အခုေနာက္ပိုင္း မွာ လုလုေအာင္ ဟာ တင္လိုက္တိုင္း လည္း အမိုက္စား ပုံေလး ေတြပဲ တင္တတ္ တာ ေၾကာင့္ ပုရိသေတြရဲ့ ဝန္းရံမႈကို ရရွိေနတာ ပါ..။
မၾကာေသးမီ ကလည္း သူမရဲ့ လူမႈ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ မွာ အလန္းစား ပုံေလး ေတြ တင္ေပး လာ ခဲ့ပါ တယ္.ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ လုလု ေအာင္ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြကို ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပးလိုက္ပါ တယ္ ေနာ္…။